The Good Life — Trip LEE - OFISIALY SITE
Fa ny tapany voalohany 2011, Aho, tsy mba nanao hira, tsy misy endri-javatra, tsy mampiseho, tsy misy na inona na inona. I Nifindra tany Washington DC sy naka olona tokony ho 5 volana eny noho ny asa fitandremana internship. Na dia tsy nandeha aho izao tontolo izao sy mijoro eo anoloan'ny ny ranomasina ny olona isan-alina, dia iray amin'ireo tena taon-jina teo amin'ny fiainako. Rehefa tapitra ny internship nanomboka nandeha indray aho, ary moramora nanomboka niasa tamin'ny mozika vaovao. Around lavo aho ho tanteraka daka fitaovana miasa eo amin'ny rakikira fahefatra Solo. Ary rehefa afaka volana ny asa mafy, ny raki-kira dia tsara tarehy be vita.
Tsy afaka maneho ny fomba na dia faly aho handefa azy. Mijery foana aho mba hanome ny olona zavatra tsy nanome azy eo anatrehan'ny. Tsy te-remake rakikira efa nanao aho. Te hanome anao ny raki-kira vaovao, miaraka amin'ny mozika vaovao, sy ny fomba vaovao amin'ny fankalazana iray ihany ny fahamarinana taloha.
In 2006 eo an-tanako rakikira voalohany, Raha toa izy ireo ihany Fantatro, Te hilaza ny olona momba ny Andriamanitra be voninahitra izay tiako ho fantatr'izy. In 2008, "20/20″ nivoaka aho ary te-handrisika ry namana mba hahita ny Tompo amin'ny tena fahitana. 2 taona maro taty aoriana, "Teo anelanelan'ny roa Worlds” nandatsaka aho ary te-dikany ny dikan'ny hoe miaina fiainana ao amin'ny tontolo lavo eo am-piandrasana ny Hero mba hamonjy ny andro. Ary tamin'ity taona ity, manomboka Aprily 10, Te-hijery sy manitsy "The Good Life.” Na dia izao tontolo izao, ny nofo, ary ny devoly handainga amintsika momba ny zavatra ny fiainana tsara dia, tsy voatery ho fehezin'ny ireo lainga. Tsy voatery ho robot. Afaka mifidy ny fiainana. Te-fanamby ny lainga no efa nolazaina, ary hanolotra ny vaovao sy be voninahitra kokoa sary. Join me on the this journey.
Peteyboy82 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:35 aho • navalin'i